संक्रमितको स्याहार गर्न आफ्नो मान्छे बस्दिनुहोस्Main Samachar
संक्रमितको स्याहार गर्न आफ्नो मान्छे बस्दिनुहोस्
४ मंसिर २०७७, बिहीबार २०:४३ प्रकाशित
दशैँ आँगनमै थियो । चारैतिरको रमझम, रंगीचंगी रौनकले घर, टोलमा दशैँको उमंग छाएको थियो । खुसी साथ दशैँ मनाउनेहरुको भिडमा म र मेरो परिवार पनि आम परिवार सरह तयारी गर्दै थियौं । दशैँको लागि घरमा गर्नुपर्ने सबै तयारी पूरा हुँदै थियो ।
दशैँको पञ्चमी अर्थात कात्तिक ५ गते मलाई सामान्य ज्वरो आउन थाल्यो । ओखती प्रयोग गरी हालें । (ओखती सकभर प्रयोग नगर्दा राम्रो २/३ दिनसम्म) सामान्य मौसमी फ्लू त हो नि भनेर अलि हेलचक्र्याइँ पनि गरें ।
कात्तिक १० गते । दशैँको टीकाको दिन । यसपाला घरमा टीका नभएका कारण सामान्य खानपिन मै रमाइलो गरियो । त्यसदिनसम्म आई पुग्दा साधारण ज्वरो, रुघा, सुक्खा खोकी र ज्यान दुख्ने, गल्ने भैसकेको थियो । अझैसम्म पनि मौसमी फ्लू होला भनेर हेलचक्र्याइँ गरिरहें । जुन निकै मूर्खता रहेछ ।
११ गते हुँदै यो क्रम सामान्य मौसमी फ्लू नै भनी १६ गते सम्म आफ्नो स्वास्थ्यलाई अत्यधिक संक्रमणमा पु¥याइयो । ११ गते देखि १६ गते बिचको समयमा खानाको न स्वाद, न गन्ध दुबै हराइसकेको थियो । खाना नरुच्ने, ज्वरो १०२ सम्म, बिहान बेलुकी सुक्खा खोकी, केही खाइ हालियो भने पनि तीतो न तीतो स्वाद अर्थात् कोरोना संक्रमण देखिनु पर्ने सबै खाले लक्षण म मा देखिसकेको रहेछ, जुन कुरा पछि थाहा मात्र यकिन भयो । अब त अस्पताल न गए अरु उपाय छैन भन्ने लागे पछि शिक्षण अस्पताल गएर रिपोर्ट हेरियो पोजिटिभ देखियो ।
मनमा अनेकौं डर त्रास उत्पन्न हुन थाल्यो । शारिरिक र मानसिक दुबै तवरले कमजोर भएँ । दिमागले काम गर्नै छाड्यो । मन अतालियो । आफैंले आफंैलाई सम्हाल्न बहुद गाह्रो भयो । परिवारलाई त्यति नै असर पर्न गयो । १६ गतेको रात साँच्चिकै अन्धकार थियो रोगले भन्दा पनि मानसिक कुराले ग्रस्त पा¥यो शरीरलाई । फेरि केही छिन सोचें र मन दरो बनाएर सुतें ।
१७ गते दिउँसो अस्पताल गइयो । पोजेटिभ रिपोर्ट र मेरो स्वास्थ्य धेरै नै नाजुक अवस्थामा (अक्सिजनको कमी) भैसकेको कारणले भर्ना गर्ने निधो गरियो । अस्पतालको नियम अनुसार सबै कुराको प्रोसेस गरेर दिउँसो ४ बजे गएको ।
राति १०/११ बजे मात्र वाडमा बेड भेटियो र भर्ना गरियो । ४ बजे देखिको १० बजेको भर्ना हुने बिचको समयमा मेरो स्वास्थ्य समस्या हेर्दा चिकित्सकहरुको भनाइ अनुसार म मा निमोनिया देखिसकेको रहेछ अत्यधिक मात्रामा । छातिको एक्स–रे हेर्दा निमोनिया पुष्टि भएको थियो । अक्सिजन लाउँदा पनि ८५/८४ को मात्रा देखियो अक्सिजनमा ।
यस्तो अवस्था हुँदासम्म पनि ’तपाईं घरमै हेल चक्र्याइँ‘ गरेको भन्दै चिकित्सकहरुले गाली गर्न थाले । त्यस्तो सुन्दा म झनै आत्तिएँ । चिकित्सकहरुकै मुहारमा एक खालको डर देख्न थाले पछि म अतालिएँ नै । अनन्तः चिकित्सकहरुले गर्नु पर्ने सबै प्रोसेस गरेपछि मलाई बेडमा लगियो र उपचार प्रणाली सुरु हुन थाल्यो ।
मेरो अवस्था हेर्दा भेन्टीलेटर वा आइसियुमा नै राख्ने लगभग छिनो फानो भैसकेको थियो । भेन्टिलेटर वा आइसियुको कमीले मलाई सामान्य बेडमा राखेर नै उपचार विधि अप्नाइयो ।
१७ गते बेलुकीबाट चिकित्सककाअनुसार विभिन्न एन्टिबायोटिक र ओखती मेरो शरीरमा चलाउन थालियो । ६ दिनसम्म सोही एन्टिबायोटिक र ओखती चलाएपछि सातौं दिनसम्म आइपुग्दा म बल्ल होश आएको रहेछ । ६ दिनसम्म के भयो ? कसो भयो ? भन्ने मलाई केही अनुमान छैन ।
उज्यालो मैले देखिनँ कहीँ कतैपनि । आँखा भरी अँध्यारो मात्रै थियो । न दिन थाहा थियो न रात । हरेक दिन मर्दै बाँच्दै, बाँच्दै मर्दै गरेको रहेछु । सातौं दिनसम्म आइ पुग्दा बल्ल अलिअलि होश आउन थालेपछि छेउमै भएकी श्रीमती पनि खुसी भइन् । उनको मुखपनि उज्यालो देखें ।
भर्ना भएदेखिको सातौं दिनको अवस्थासम्ममा उनले नै मलाई सम्हालेकी थिइन् । कोरोनासँग म मात्रै हैन । छेउमा भएकी श्रीमती पनि लडेकी थिइन् । म संक्रमण भएर लडें भने उनी मलाई जिताउनको लागि लडिरहिन् ।
अस्पताल बस्दा धेरै देखियो त्यस्तो अवस्था र घटनाहरु आफ्नै मान्छेले पनि नजिक आएर आफूलाइ (संक्रमित बिमारीलाई) स्याहार गर्न नमिलेका कारण ज्यान घुमाउन परेको । संक्रमित बिमारीलाई चाहे होम आइसोलेसनमा होस वा अस्पतालको बेडमा तपाईं साँच्चिकै आफ्नो हुनुहुन्छ भने नजिकै बसेर बिमारीको स्याहारसुसार र रेखदेख, खानपिनमा जोड गर्नुभयो भने अवश्य तपाईंको बिमारीले कोरोनालाई जित्छ । भन्नुको अर्थ चिकित्सकहरुको उपचार विधिले मात्रै पनि कोरोनालाई जित्नु सकिन्न ।
बरु बिमारी छेउमा बस्दा सुरक्षा विधि अपनाएर बस्ने, खानपिनमा जोड दिएर बस्ने । तपाईंको इम्युनिटी पावर बढिरह्यो भने कोरोना त के स्वयं महाकाल आएपनि तपाईंलाई लान सक्दैन । मेरो मतलब बिमारीलाई एक्लै नछाड्नुहोस ।
बिमारीलाई एक्लै छाड्दा धेरैको ज्यान गएको छ । न मर्ने मान्छेहरु पनि मरेको देखेको पाइयो । यहाँ संक्रमण हुने बित्तिक्क छुनै हुन्न । लगि नै हाल्छ भन्ने ठूलो भ्रम फैलिएकोे छ । जसको कारणले थुप्रैको ज्यान गएको पनि छ । चाहे अस्पतालमा होस् चाहे होम आइसोलेनसमा बस्दा । मुख्य कुरा भनेको स्याहारसुसार नै हो । तपाईंले आफ्नो बिमारीलाई जति स्याहारसुसार गर्नसक्नु भयो । त्यति नै बिरामीले कोरोनालाई जित्न सक्छ ।
अनन्तः मेरो आठौ दिन सुरु हुन्छ । पहिलो दिनदेखिको आठौं दिनसम्म आइ पुग्दा मेरो शरीर र स्वास्थ्यको परिवर्तन धेरै भैसकेको रहेछ । पहिलो दिनदेखि सातौं दिनसम्म मेरो शरीर डढेको जस्तै थियो रे । मुहार कालो न कालो । म ८५ के जीबाट गलेर हाड र छालामा मात्रै सीमित भएको थिएँ । आफूले आफैंलाई नियालेर हेरें, शरीर सबै गलेको देखें । आँखा गडेको ।
छ दिनसम्मको लगातार चिकित्सकको उपचार विधिले मलाई गलाउनुसम्म गलायो । सायद औषधि धेरै कडा खालको परेर पनि होला । जब ओखती नर्मल चलाउनु थालियो । म होसमा आए बिस्तारै बिस्तारै म मा परिवर्तन हुन थाल्यो । अब बाँचिने भइयो भन्ने मनमा भाव आउन थाल्यो । सायद औषधिले काम गरे जस्तो लाग्यो र मन दरो बनाएर बसें । दिनहुुँ चिकित्सकको निगरानी । नर्सहरुको हेरचाह र श्रीमतीको रेखदेख स्याहारसुसारले कार्तिक २९ गते डिस्चार्ज भएँ ।
लाग्यो नयाँ जीवन पाएँ । आफ्नो बेडलाई ढोग गरें र नर्सहरुसँग बिदा मागेर रुममा आएँ । अझै पनि स्वास्थ्य तन्दुरुस्त हुन समय लाग्ने भएकोले म घरमै आराम गरिरहेको छु । ठूलो संकटबाट बचेको यो जीवनलाई नियाल्दै छु । मान्छे जति सक्दो बलियो, तन्दुरुस्त, मिलिनियर वा मै हुँ भन्ने ठाने पनि स्वास्थ्यको अगाडि लाचार र विवश हुने नै रहेछ ।
ज्यान रहे पो जीवन ! धन, मन, रुप रंग, मान सम्मान, इज्जत आदि । यी सबै–सबैको नौलो अनुभूति गरायो कोरोनाले । आखिर यी सबै बाचुन्जेललाई मात्र रहेछ भन्ने पनि मनमा लाग्यो । एक मुठी श्वास न त रहेछ जीन्दगी । कतिबेला फुत्किन सक्छ यो कसैलाई अत्तो पत्तो हुँदैन रहेछ । तसर्थ यो जीवनलाई तनाव मुक्त, हाँसी खुशी साथ बिताइदिनुस् ।
अस्पतालमा जे देखें, घरमै आइसोलेसन बसेर ज्यान कतिको गएको पनि देखें । १०/१५ दिन सम्म बिमारीलाई घरमै राखेर चिकित्सकहरुको परामर्शले खासै फरक न परेको देखें । पछि तिनै बिमारी अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल ल्याइएको पाइयो । जुन एकदम गलत प्रक्रिया हो ।
होम आइसोलेसन भनेको सामान्य अवस्थामा मात्रै घर मै बस्ने हो । सकेसम्म अस्पताल नै जाने सल्लाह दिन्छु म । संक्रमण भएको व्यक्ति साथ नछाड्नु होला । बिमारीको छेउमै बसेर हेरचाह रेखदेख र स्याहारसुसार गरे अवश्य कोरोना जित्न सकिन्छ ।
यहाँ त्यस्तो घटना कति पाइयो पाइयो । संक्रमितको छेउमा नजानाले उसको स्याहारसुसार नहुनाले ज्यान गएको थुप्रै घटना देखें । १५ दिनको अस्पताल बसाइमा । सकेसम्म संक्रमण भएको व्यक्तिको छेउमा जानु हुन्न भन्ने गलत प्रचारले थुप्रै ज्यान गएको पाइयो । अझै त्यो स्थिति अस्पतालमा बढी पाइयो ।
जसका कारण दिनहुँ ज्यान घुमाउनु परेको छ । चिकित्सकहरुको आफ्नो प्रक्रिया छ । उहाँहरुको आफ्नो सिस्टमले उपचार गर्ने गर्छन् । बिमारीको सतप्रतिशत नै हेरचाह गर्छन् । साँच्चिकै चिकित्सक भगवानकै रुप हुन यो अवस्थामा । भयंकर गलत मान्छेहरुले गरिरहेका छन्, यहाँ बिमारीलाई एक्लै छाडदिने, उसलाई उसको अवस्थामा छाड्दिने । जुन आफैंमा गलत छ ।
म बारम्बार यही नै भन्छु आफ्ना संक्रमित बिमारीको साथ नछोड्नु होला । बरु स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनु होला । यसो गरे पक्कै तपाईंको मान्छेले कोरोना जित्न सक्छन् ।
बालकोट भेटवार्ता : एमसीसी अघि बढाउन भएपनि संसद अवरोध राेक्न देउवाको आग्रह